ကျောင်းဝင်း၌လိင်ဆက်ဆံရန် - နှုန်းထားများ
ကောလိပ်နှစ်များသည်ဆန္ဒရှိသူများနှင့်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သာရှိသောသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းအတွက်အဓိကကျသည်။ စာသင်ခန်းများအကြားဒေသခံ Starbucks တွင်တွေ့ဆုံခြင်းထက်အချည်းနှီးသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေခြင်းသည်အမြဲတမ်းပျော်စရာကောင်းသည်။
လိင်မဖြစ်သင့်သည့်နေရာများတွင်လိင်၏စိတ်ကူးသည်အချို့အတွက်အလွန်သွေးဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လိင်မှုကိစ္စပြုရန်နေရာအသစ်များဤတွင်တွေ့ရသည်။
Busch ကားရပ်နားရန်နေရာရှိ Porta Potties
ရေချိုးခန်းဟောင်းအလျင်အမြန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုရေတွက်ပြီး porta potty quickie ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ဤအရင်းအမြစ်ကို Busch Campus Center / Dining Hall ကားရပ်နားရန်နေရာများတွင်အလွန်အာရုံစိုက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုရရှိစေသည်။ လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်အတွက်အိမ်သာသုံးစက္ကူဖြင့်သွားပါ။
သင်ထရပ်ကားတစ်စီးမမောင်းလျှင်ကားလိင်သည်မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ကြိုးစားကြည့်ပါ - ရှည်လျားသော B အကြံပြုထားသည် - လမ်းပေါ်တွင်မြန်ဆန်။ ကျယ်ဝန်းသည့်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာနေထိုင်မှုအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာထိုင်ပြီးနောက်ကျောထိုင်ခုံသို့သွားပါ။ Classy ထားပါ။ ဘတ်စ်ကားမောင်းသူကသင့်အားကြည့်နေသည်ကိုမမြင်လိုပါ
တက္ကသိုလ်သည်ဤမျှကြီးမားသောကျောင်းဝင်းကြီးပေါ်တွင်ထိုင်နေသောကြောင့်တောတောင်ထူထပ်သောနေရာများမှာထူးဆန်းပြီးပျော်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Busch ကျောင်းပရဝုဏ်သည်ထမင်းစားခန်းဘေးရှိကားရပ်နားရန်နေရာတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တောအုပ်ကိုပေးထားသည်။ သဘာဝနှင့်အတူတ ဦး တည်းဖြစ်လာဖို့တစ်လမ်း, ဒါပေမယ့် bug ကိုတွန်းလှန်ဆောင်ခဲ့နှင့် tick များမရှောင်ကြဉ်ရန်။
တစ်စုံတစ် ဦး က tinder ရှိမရှိသိရန်မည်သို့မည်ပုံ
သူတို့ကဘာမျှမက Passion ရေအိုင်ကမခေါ်ကြဘူး? rimshot *
ကောင်းပြီ, ဒီတစ်ခုအတှကျအများကြီးရှင်းပြမဟုတ်ပါဘူး။ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးကို Passion ရေကန်သို့ခေါ်သွားပါ၊ စောင်တစ်ထည်နှင့်သင့်ပါတနာကိုခေါ်လာပြီးသင်ကားစီးချိန်တွင်သူတို့၏ဘတ်စ်ကားကိုဖမ်းရန်ပတ်ပတ်လည်ပြေးနေသောကျောင်းသားများ၏စိတ်ကူးယဉ်မြင်ကွင်းကိုနှစ်သက်ပါ။
ကျောင်း၊ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ကျောင်းသားစင်တာများရှိသည့်ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအဆောက်အအုံအတော်များများသည်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည့်ခေါင်မိုးများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကပ်လျက်အဆောက်အ ဦး များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်အမြင့်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိစေရ။
ဖတ် - ARC 103
ပါမောက္ခသင်အိပ်ပျော်နောက်တဖန်တယ်? စာသင်ခန်းအတွင်းမှာလုပ်ကြည့်ပါ။ အတန်းချိန်တိုးချဲ့ရန်သင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး အားသင့်အတွက်မှတ်စုများယူရန်ပြောပါ၊ သို့သော်သူတို့နှင့်မထိုင်ပါနှင့်၊ ထိပ်ဖျား: အားကစားရုံထိုင်ခုံပုံစံမပါဘဲဟောပြောခန်းမတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ၊ သို့သော် ပို၍ ပြားသောပြားချပ်ချပ်ထားသည့်ခန်းမ။
စာသားဘယ်နေရာမှာမဆိုကွတ် / ဒေါက်ဂလပ်အပေါ်
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားပြီးလှပသောမြေပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးသင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် Cook / Douglass Campuses ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နေရာတစ်ခုရှာရန်သေချာသည်။ အဆောက်အ ဦး များအကြားရှိသစ်တောFromရိယာများမှဝှက်ထားသောလှေကားထစ်များအထိဤကျောင်းဝင်းများကသင်အသုံးပြုရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ သော်လည်းရှဥ့်များ, ဒါမှမဟုတ်ရံဖန်ရံခါသမင်နှင့်အတူသတိထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် Geese ။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ poop ။
ထိုကြီးမားသောစမ်းသပ်မှုအတွက်လေ့လာရန်လော။ အခြားတစ်ခုထက်တစ်ခုရွေးရန်မလိုအပ်ပါ။ စာကြည့်တိုက်များသည်၎င်းကိုရရန်အတွက်ဂန္ထဝင်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှုပ်ပွနေသောစာအုပ်စင်များနှင့်ကမ်းလှမ်းထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောစားပွဲခုံများအကြား၌နေရာများစွာရှိသည်။ သို့မှသာသင်၏မျက်လုံးများကိုစာအုပ်များနှင့်ဝေးရာသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်မလိုပါ။ သငျသညျခန္ဓာဗေဒအတွက်လေ့လာနေခြင်းနှင့်အချို့သောလက်တွေ့ဘဝမော်ဒယ်များချင်တယ်မဟုတ်လျှင်။
ကျောင်းဝင်းအပေါ်နေရာတိုင်းရရှိနိုင်နောက်ထပ်ဂန္။ သင်မှတ်တမ်းတင်ခံရခြင်း၏စိတ်ကူးကိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်လျှင်, ကင်မရာစောင့်ကြည့်အောက်မှာမဟုတ်သောလှေကားကောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဤနေရာတွင်အဘယ်သူမျှမတရားသဖြင့်စီရင်။
B.E.S.T. ခန်းမ Lounge
ညဥ့်နက်သည့် Netflix နှင့်ချမ်းအေးသည့်အစည်းအဝေးများသည်တည်းခိုခန်းများ၌ကျင်းပရန်ရည်ရွယ်ထားသည်မဟုတ်လော။ သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုသင်၏ကြမ်းပြင်၏အခန်းနားသို့ခိုးယူခြင်းဖြင့်သင်၏အခန်းဖော်၏ဖမ်းဆီးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင့်လက်တော့ပ်နှင့်စောင်ကိုယူလာပြီးအလုပ်လုပ်ပါ။
အဝတ်လျှော်စက်များသည် ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးခြောက်သွေ့သူများသည် ၅၀ ခန့်ကြာသည်။ သင့်စက်ဘီးကိုရွေးချယ်ပြီးစောင့်ဆိုင်းရန် ပို၍ ပျော်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
ပြောရန်မလိုအပ်ဘဲထင်ရသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသော၊ ရင်းနှီးသောလှုပ်ရှားမှုသည်သင်၏အခန်း၏သီးသန့်တည်ရှိမှုတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိပ်ဆောင်တစ်လုံးကိုမျှဝေသုံးစွဲပါကတံခါးပေါက်ပေါ်တွင်ခြေအိတ်တစ်ချောင်းကိုထည့်ပါသို့မဟုတ်သင့်အခန်းအားစာသားရိုက်ကူးခြင်း၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ။
အဘယ်အရာကိုအကြံပြုမ Instagram ကိုအပေါ်ဆိုလိုဘူး
သင်ကရရန်ရွေးချယ်သည့်နေရာတိုင်း, သင်ဖမ်းမိမရသေချာအောင်။ စမတ်ကျတတ်သူဖြစ်ပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ပျော်စရာကောင်းပါစေ။